ကိုရီးယားသို့ကားဘယ်လိုတင်ပို့မလဲအပိုင်း ၁ | ကိုရီးယား၏ဆိုးလ်
Posted by ကို Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | Survival လမ်းညွှန် | 0
ဤဆောင်းပါးသည်သင်၏ကားကိုကိုရီးယားသို့တင်ပို့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားနိုင်ငံများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတည်းနီးပါးဖြစ်သော်လည်းသင်၏ကားကိုအခြားနိုင်ငံများသို့မတင်ပို့မီသင့်အားလုံ့လဝီရိယရှိရှိသုတေသနပြုရန်လိုလိမ့်မည်။
သင်၏အဖိုးတန်သောပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်များဖြစ်သောသင်၏ကား၊ ထရပ်ကားသို့မဟုတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုအမေရိကန်မှတောင်ကိုရီးယားသို့တင်ပို့ခြင်းသည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ကားကိုတင်ပို့လိုပြီးသင်၏အလုပ်သည်ကိုရီးယားတွင်ရှိလျှင်သင်ထိုတွင်နေထိုင်လိုသည်သို့မဟုတ်သင်ဒီမှာအနားယူလိုပါကဤဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်မှကိုရီးယားသို့ကားတစ်စီးတင်ပို့ခြင်းသည်လည်းစစ်တပ်တွင်မရှိသောသူများအတွက်အလုပ်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ကားကိုကိုရီးယားသို့သယ်ဆောင်လိုပါကသတင်းအချက်အလက်ရရန်သင့်တော်သောနေရာသို့ရောက်သည်။ ဒီ post ကစစ်မှုထမ်းနေစဉ်ငါ့ရဲ့ကားကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပါ။
ငါကိုရီးယားမှာနေတယ်။ ကျွန်တော့်ကားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Seattle Vehicle Storage Facility မှာသိမ်းထားတယ်။ ကျွန်တော့်ကားမောင်းတာကိုလွဲချော်သွားလို့အဲဒါကိုကိုရီးယားကိုသယ်သွားချင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သော Chevrolet Camaro 2010 2SS၊ “ Transformers” ရုပ်ရှင်အတွက်ထွက်ပေါ်လာသောပထမဆုံး Camaro မော်ဒယ်လ်။ ဒီကားကြောင့်ဂန္ထဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Vehicle Storage Facility (VSF) သည်စစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ကားသိုလှောင်ရာနေရာဖြစ်သည်။ စစ်ဘက် ၀ န်ထမ်းများအားပြည်ပသို့တင်ပို့သည့်အခါဤစက်ရုံများရှိယာဉ်များကိုအခမဲ့သိုလှောင်ထားခွင့်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားမော်တော်ယာဉ်သိုလှောင်အဆောက်အ ဦ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လျှောက်လုံးနှင့်ပြည်ပမှာတည်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်၏ယာဉ်ကို VSF တွင်သိုလှောင်ခြင်းကသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ကားကိုပုံမှန်လစဉ်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီးတစ်စုံတစ်ရာမှားယွင်းမှုရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်အားအသိပေးလိမ့်မည်။ မင်းအမေဒါမှမဟုတ်အဖွားကမင်းကိုအဲဒီလိုလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့မင်းပြောနိုင်သလား။
ကိုရီးယားကိုရောက်တော့ငါအမေရိကန်အခြေစိုက်ကိုးရီးယားကိုအခြေချပြီးစီးပွားရေးမှာနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါစျေးပေါတဲ့ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့မလိုချင်ခဲ့ဘူး၊ အခြေခံအားဖြင့်တိပ်ခွေ၊ အရူးကော်နှင့်နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းတို့ဖြင့်ကျင်းပသောအမှိုက်ကားတစ်စီး။
ငါ post ကိုပယ်နေထိုင်ခဲ့နှင့်အလုပ်နှင့်ထံမှသွားရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကားတစ်စီးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆိုငါဘာလုပ်ခဲ့လဲ ကျွန်ုပ်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုတောင်ကိုးရီးယားသို့ပို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ကျွန်ုပ်၏ကားကိုတင်ပို့ရန်လိုအပ်သည့်ငွေကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အိတ်ကပ်ထဲမှထုတ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အိတ်ကပ်ထဲမှပိုက်ဆံ ပေး၍ ကျွန်ုပ်သည်စစ်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ကားကိုတင်ပို့ခွင့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရှိနေစဉ်နောက်ပိုင်းတွင်ကိုရီးယားသို့ ဦး တည်လျှင်သင်ကားကိုနိုင်ငံတကာမော်တော်ယာဉ်တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီသို့သင်ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ ထိုအခါသူတို့သည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုယူ။ လှေပေါ်တွင်ကိုရီးယားသို့ရ။ နောက်ဆုံးခရီး, ကိုရီးယား!
အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီးဆွေမျိုးသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကိုကားကိုသင်္ဘောကုမ္ပဏီသို့ပို့ဆောင်နိုင်ပါကသင်္ဘောကုမ္ပဏီမှ၎င်းကိုယူဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိသားစု ၀ င်များ (သို့) သူငယ်ချင်းများမရှိသောအိမ်သို့ ပြန်၍ အိမ်ပြန်ရန်အတွက်နိုင်ငံခြားသို့ရောက်လျှင်၊ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီကိုမှီခိုရမည်။ ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီမှကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး သည်သင်၏ကားကိုမည်သည့်နေရာမှမဆိုယူနိုင်ပြီးကိုရီးယားသို့ပို့ရန်လှေပေါ်တွင်တင်နိုင်သည်။ သင်၏ကားတည်နေရာနှင့်နီးသောမော်တော်ယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရှာရန်သင့်အားအကြံပြုလိုပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိစေတယ်မဟုတ်လား။
သင်၏ကားရရန်ကားပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီသည်ရှေ့နေတစ် ဦး လိုအပ်သည်။ ဒါဆိုဘာလဲ
ဤနေရာသည်“ ရှေ့နေချုပ်” အားကစားစေသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအားသင်၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးသည်။ သင်ရေးသားပြီးကြောင်းနှင့်“ တရားဝင်” လုပ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အခြားအခြေအနေများအတွက်ဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ဒါဆိုငါဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ
ငါ Go Go Gadget ၏ရှေ့နေပါဝါအော်! ထိုစကားမှန်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ Hmmm ။ နောက်တာပါ။
ဥပဒေရေးရာအထူးကုသို့မဟုတ်ရှေ့နေတစ် ဦး သည်တရားရေးအာဏာကိုရေးဆွဲနိုင်သည်။ စစ်တပ်အတွင်းတွင်တရားဝင်တံဆိပ်ခတ်ထားသောတရားဝင်ရှေ့နေချုပ်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည့်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည့်ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူများလည်းရှိသည်။ ဒါ့အပြင်ငါကစစ်တပ်အရာရှိများနှင့်မှီခိုသူများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သလား ငါအခြေစိုက်စခန်းအပေါ်ဥပဒေရေးရာအထူးကုထံသို့သွား။ ကအခမဲ့ပြုလေ၏။ အခြားလူတိုင်းအတွက်၊ သင်ဟာဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူ၊ ရှေ့နေလိုအပ်တယ်။
တောင်ကိုရီးယားသို့မော်တော်ယာဉ်များတင်ပို့ရန်အတွက်ရှေ့နေတစ် ဦး ထက်ပိုသော
ငါ (သုံး) ရှေ့နေများ၏တန်ခိုးသုံးခုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးသောရှေ့နေကသင်္ဘောကုမ္ပဏီမှယာဉ်သိုလှောင်ရုံမှယာဉ်ကိုယူရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ရှေ့နေတစ် ဦး သည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လူတစ် ဦး ၏နာမည်ရှိရမည်။ ဒါကြောင့်ငါရေကြောင်းကုမ္မဏီကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးအဲဒီမှာတစ်ယောက်ယောက်ကိုမေးခဲ့တယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုသူတို့ရဲ့လူတစ် ဦး ရဲ့အမည်ကိုရှေ့နေချုပ်ရဲ့အမည်ပေးခဲ့တယ်။
ဒုတိယရှေ့နေချုပ်ကရေကြောင်းကုမ္ပဏီအားမော်တော်ယာဉ်ကိုယူဆောင်လာပြီးအမေရိကန်အကောက်ခွန်မှတစ်ဆင့်၎င်း၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ DBA ၏အမည်သည်လူရှေ့မှောက်တွင်မဟုတ်ဘဲဤရှေ့နေချုပ်တွင်သာရှိရမည်။ DBA ဆိုသည်မှာ“ စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းကဲ့သို့” ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသောကုမ္ပဏီ၏အမည်ဖြစ်သည်။
တတိယမြောက်ရှေ့နေချုပ်ကသင်္ဘောမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့သွားပြီးကျွန်ုပ်၏ခေါင်းစဉ်ကိုကားသို့သွားရန်သင်္ဘောကုမ္ပဏီမှတစ်ယောက်ယောက်ကိုခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဟမ်လား ဘာဖြစ်လို့မေးရတာလဲ ရိုးရှင်းသော။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်သောယာဉ်ပေါ်တွင်ချေးငွေတစ်ခုကျန်နေသေးပါကသင်ကားကိုသင်ပိုင်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊။ ဘဏ်ကသင့်ကိုချေးငွေပေးပြီဆိုတော့သူတို့ကကားကိုချေးငှားလိုက်ပြီ။ ဆိုလိုတာကသင်ကကားချေးငွေကိုသင်ပြန်ဆပ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ကသင်က lien ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပြီးသင်က lien ကိုင်ဆောင်သူအဖြစ်ဘဏ်နှင့်အတူ lien အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
အကယ်၍ သင့်အတွက်ထိုအရာဖြစ်ပါကဘဏ်သို့ဖုန်းခေါ်။ ကားတင်ရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပါ။ အကယ်၍ သူတို့အတည်ပြုမယ်ဆိုရင်မင်းကိုမင်းရဲ့ကားကိုကိုရီးယားကိုတင်ပို့ဖို့တရားဝင်စာတစ်စောင်ပို့ပေးလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုအတည်မပြုပါကသင်အလုပ်လုပ်ရန်ဘတ်စ်ကားစီးမည်။ နည်းပညာအရကားသူတို့သည်ကားပေါ်တွင်တင်ထားသောကိုင်ထားသူ ဖြစ်၍ သင်၏ချေးငွေကိုအပြည့်အဝမပေးမချင်းသင်ကကားကိုပိုင်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒါနဲ့ကားချေးငွေကိုပြန်ဆပ်ပြီး BumbleBee ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အိုး၊ စိတ်မကောင်းပါ၊ ၎င်းသည်မူပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော့်ကားက Fire Wall လို့ခေါ်တဲ့အတွက်အဲဒါကိုမကြိုက်ဘူး။
အကယ်၍ သင့်တွင်ကားချေးငှားခွင့်မရှိပါကသင်ကားတင်ပို့နိုင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးမည်သူမဆို၏ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံစရာမလိုပါ။ ငါ့ကား၌ငါ့မူရင်းခေါင်းစဉ်မရှိသောကြောင့်, သို့သော်, ငါတတိယ (တတိယ) ရှေ့နေချုပ်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့?
ဒါကအပိုနာကျင်မှုဖြစ်မယ်ဆိုတာငါသဘောပေါက်လိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဟာငါ့ချေးငွေကိုဆပ်ပြီးခေါင်းစဉ်ကိုတောင်းခဲ့တယ်။ ဒီသတ္တုတွင်းနဲ့ငါအခုလိုချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဟာသူတို့ဆီကိုတိုက်ရိုက်အီးမေးမပို့ခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်။
ဘဏ်သည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသောအီလက်ထရောနစ်ယာဉ်ခေါင်းစဉ်အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏မှတ်တိုင်ဖြစ်သောပြည်နယ်၏ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ယာဉ်၏အမည်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာကကျွန်ုပ်၏ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပျက်သွားသည်။
မှတ်ပုံတင်ရုံးသည်ခေါင်းစဉ်ကိုပြုပြင်ပြီးနှစ်ပတ်အကြာတွင်၎င်းဖိုင်၏လိပ်စာသို့စာပို့ခဲ့သည်။ ငါ့စံချိန်တင်အိမ်သည် ၀ ါရှင်တန်ပြည်နယ်၊ တာကမာတွင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ယာဉ်မောင်းတာကိုငါ ၅ နှစ်ကျော်မနေခဲ့တဲ့နေရာကိုပို့လိုက်တယ်။
ကျွန်တော့်ကိုနိုင်ငံရပ်ခြားကဖုန်းခေါ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဟာသင်္ဘောကုမ္ပဏီရဲ့လိပ်စာကိုပို့လိုက်တယ်။ သင်ကားပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီနှင့်အတူဖြစ်ရန်မူရင်းမော်တော်ယာဉ်ခေါင်းစဉ်လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့လှေပေါ်ကကားကိုသွားပြီးတဲ့အခါသူတို့ကမူရင်းမော်တော်ယာဉ်ခေါင်းစဉ်ကိုမင်းဆီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကတောင်ကိုရီးယားဆိပ်ကမ်းမှာဆိုရင်သူက destination port ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကပိုင်ဆိုင်မှုကိုတောင်းဆိုဖို့လိုလိမ့်မယ်။
သို့သော်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ယာဉ်ခေါင်းစဉ်အားမပို့နိုင်သောယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ပြန်ပို့ခဲ့သည်။ VRO ကကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကောက်ယူနိုင်သော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုရီးယားတွင်နေထိုင်ခဲ့ရပြီး VRO သို့လေယာဉ်ပေါ်တက်။ မရနိုင်ခဲ့ပါ။
ယာဉ်ခေါင်းစီးအားမော်တော်ယာဉ်တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီသို့ရရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အချိန်ဖြုန်းတီးနေသည်။ ငါလစဉ်လစဉ်ကားငှားရမ်းနေတယ်။ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီဆီကိုကားတစ်စီးခေါင်းစဉ်ရဖို့ကြာလေလေ၊ ကျွန်တော့်ဆီကိုကားသွားဖို့လည်းကြာလေလေပဲ။
အဲဒီအချိန်မှာငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေရာမရှိဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကကိုရီးယားမှာနေပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားနာမည်ကမှားနေတာပဲ။ ကျွန်ုပ်၏မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကိုရီယားသို့ပို့လိုက်ခြင်း၏စောင့်ဆိုင်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်တတိယရှေ့နေကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
တတိယ“ ရှေ့နေ” သည်အသုံးဝင်သည်။ ကျွန်တော့်မှာ“ ရှေ့နေချုပ်” ကသင်္ဘောမှတ်ပုံတင်ရုံးကိုသွားပြီးမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရုံးကိုသွားခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီရှေ့နေကယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရုံးကိုအခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခုထပ်မံလည်ပတ်ရန်နှင့်စာပို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ရက်များစွာချိန်းခဲ့သည်။ စာတိုက်မှပျောက်ဆုံးသွားမည့်နောက်ထပ်မော်တော်ယာဉ်ခေါင်းစဉ်။
ဤသည်မှာဤစာမူအဆုံးသတ်မည့်နေရာဖြစ်သည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ။ ဤသည်မှာကော်ဖီ၊ ဆိုဒါ၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်နှင့်အပိုင်း ၂ ကိုဖတ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုကျော်တက်ပြီးသင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုကောက်ယူသည်။